Vaovao - 2021 Munich Shanghai Electronics Show
Tamin'ny 14 aprily, nisokatra araka ny fandaharam-potoana ny fampisehoana 2021 Munich Shanghai Electronics, ny Pudong New International Expo Center any Shanghai. Ny lohahevitry ny Expo amin'ity taona ity dia ny "fahendrena mitarika izao tontolo izao", mampiseho be dia be ny vokatra manerantany, lehibe, karazana teknolojia avo lenta avo lenta. Nandeha nanao fampirantiana ireo solontenanay.
Elektronika Shina no andiany fampirantiana elektronika mahery indrindra eran'izao tontolo izao any Munich, miaraka amin'ny fahatakarana mazava tsara ny tsena fampiharana mafana toy ny fiara Internet, ny Internet, ny indostrialy, ny fifandraisana 5g, sns. mpampitohy, singa mandalo, famatsiana herinaratra, fandrefesana andrana, teknolojia iot, fitaovana elektronika sy fitiliana, PCB, EMS, fampirantiana ary haitao hafa, manangana sehatra ifanakalozana ho an'ireo mpamatsy elektronika sy mpanjifa indostrialy hiresahana ny fanavaozana ny haitao ary handrisihana ny fiovan'ny indostria.
Amin'ity fampirantiana ity dia tsy vitan'ny hoe nitondra vokatra taloha be dia be izahay niaraka tamin'ny teknolojia matotra, fa naneho ihany koa ireo vokatra farany indrindra, toy ny birao fampitana haingam-pandeha haingam-pandeha mankany amin'ny mpampitohy, USB TYPE C, ultra-manify miaraka amin'ny wafer hidin-trano, faladiany karatra fonosana ary fatra fandrefesana fiara amin'ny faran'ny aloha ny vokatra vaovao.
Trano atoma nandritra ny fampirantiana dia nahasarika firenena sy faritra maro an'ny mpanjifa terminal, mpizara sy injeniera elektronika, ny fividianana entana sy ny hafa tonga mitsidika sy mifampidinika, tonga ny olona, ​​maro be! Ny solontenanay dia manome fahalalana matihanina sy marary ho an'ny mpanjifa tsirairay hanazavana, ny fifampiraharahana amin'ny orinasa.
Mandritra izany fotoana izany dia nanararaotra ihany koa izahay hihaona sy hiresaka amin'ireo mpanjifantsika taloha. Mpanjifa taloha maro no nidera ny fivoarantsika haingana sy ny fanovana nandritra ny taona maro, ary mankasitraka ny vokatra sy serivisinay. Matoky tanteraka izy ireo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny tohiny, AZA MITADIAVA NY fiaraha-miasa maharitra amin'ny US WIN-WIN!
Nahavita famaranana naharitra telo andro ilay fampirantiana. Amin'ny toe-javatra misy ny valanaretina, faly izahay fa natao soa aman-tsara ny fampirantiana. Izy io dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fampiroboroboana ny marika, fampiroboroboana ny vokatra vaovao, ary ny fifandraisana amin'ireo mpanjifa vaovao sy taloha. Nameno antsika fanantenana sy fanantenana amin'ny ho avy io, azoko antoka fa hiaina ny 2021 ATOM, ary hanohy hanao izany isika ho toy ny vahaolana mpampifandray natokana! Natao matihanina!
Fotoana fandefasana: Mey-20-2021